/blog/Gallery/Sida loo Isticmaalo Trenbololone Recipe si loogu qaso Trenbolone Enanthate Powder
Posted on 05 / 21 / 2019 by 阿斯劳 ku qoray Gallery.
Trenbolone E (Trenbolone enanthate) waa mid ka mid ah steroids oo loo kala saari karo inay tahay kaabisyo awood leh oo lagu daro murqaha. In kastoo markii horaba loo adeegsan jiray koritaanka murqaha xayawaanka, baahida ay ka qabaan jirdhiska jirka ayaa koray mudo sanado ah sababtoo ah waxtarkeeda muruqyada.
Tren E (Trenbolone enanthate) waa qaabka ugu dheer ee loo yaqaan 'trenbolone' wuxuuna leeyahay heer qaadasho dheer. Sidaa awgeed, heerka uu ka baxayo jirka ayaa isna gaabis ah. Waxay leedahay nolol badhkeed oo ah laba iyo toban maalmood, taas oo ka dhigaysa inay yeelato waqti sarreeya. Nuska-nuska dheer, si kastaba ha noqotee, wuxuu gacan ka geystaa ficil-celinta aadka u dheer.
100mg / mL Trenbolone Enanthate oo loogu talagalay 100mL
3mL iyo 20mL / 60ml siriinjo leh irbad cabirkeedu yahay 18-21
-Tilaabada 3aad: Ku kululee weelka biyo qubeyska ku jira
Oo ku dar Benzyl Benzoate (BB) iyo Benzyl Alcohol (BA) oo walaaq. Cayriin Trenbolone wuxuu bilaabaa inuu ku milmo budada. Haddii aad rabto inaad kordhiso xawaaraha hawsha, hubi tallaabada 3.
Waa kuwan dhowr ka mid ah faa'iidooyinka Trenbolone Enanthate ee ay ku keento miiska marka aad go'aansato inaad isticmaasho.
Si ka duwan qaar ka mid ah steroids-ka oo muruqoodu uu yahay natiijada haynta biyaha, kororka miisaanka 'Trenbolone Enanthate' waa natiijada koritaanka nitrogen, taas oo keenta koritaanka murqaha joogtada ah.
Lahaanshaha liiska ugu awoodda badan steroids, Trenbolone Enanthate waa inuu horeyba u noqdaa mid ka mid ah steroids aad ugu jeceshahay. Haddii aad qorsheyneyso inaad bilowdo isticmaalkeeda, taasi walwal kuguma abuuri doonto. Waxaad go'aansan kartaa ama aad iibsan kartaa Trenbolone Enanthate khadka tooska ah.
Sidee loo sameeyaa testosterone kobcinta gudaha ee xNUMX DECA budada-Ultimate Guide Sida loo sameeyo Nandrolone Decanoate (Durabolin)